Uncamathisele iitumato yenye yezinto ezityiwa imihla ngemihla. Ingenza ukutya kube mnandi kwaye kube sempilweni ebantwini. Singenza umgangatho owahlukileyo ngokwezicelo zabathengi kunye nomgangatho womgangatho wentengiso, uncamathiso yitamatisi eqhelekileyo yendalo umbala obomvu, i-100% ngaphandle kwezongezo, zingqindilili kwaye kungekho manzi. Sinokwenza i-GINO esemgangathweni yeetamatato. "Umgangatho wokuqala" uhlala umgaqo wethu wokuqhubekeka i-tomato paste. Umzi mveliso wethu ugubungela ummandla we-58,740 yeemitha zesikwere, imveliso yonyaka ngoku ziitoni ezingama-65,000, si ...